1. Cast aluminium firaka akorandriaka, maty-fanariana, ambonin'ny sprayed, endrika tsara tarehy na welded amin'ny Stainless vy, poloney ambonin'ny;
2. Sodina vy na tariby tariby;
3. Ny compensator dia azo ampiasaina araka izay ilaina.
1. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny modelimplication ny fifantenana tsy tapaka, ary ny Ex-mark dia tokony ampiana ao ambadiky ny modelimplication.Ny môdely dia toy izao manaraka izao: kaody ho an'ny vokatra modely implication + Ex-mark. Ohatra, mila fipoahana-porofo High pressure sodium jiro ny aluminium firaka amin'ny 400W IIC, izay ny fametrahana dia karazana D.Ny dikan'ny maodely dia "BAL-N400L+Exd IICT4 Gb+20."
2. Raha misy fepetra manokana sasany, dia tokony ho tondroina ho baiko.
teo aloha: PBb andian-dahatsoratra Positive tsindry fipoahana-porofo fizarana board
Manaraka: BS51 andian-tselatra tsy mipoaka
Jiro porofo mipoaka
Jiro fiasan'ny porofo mipoaka
Ny endri-javatra momba ny modely 1. Ny casing ivelany dia vita amin'ny fitaovana plastika injeniera, ny fonony mangarahara dia tsindrona polycarbonate, ary ny loharanon-jiro LED dia natsangana, izay maivana amin'ny lanjany ary mety hampiasaina.2. Ny fefy dia manana naoty IP66 mba hiantohana ny fiasan'ny jiro amin'ny toe-javatra henjana rehetra.3. Ny sisiny anoloana amin'ny jiro dia omena amin'ny vy tsy misy pentina izay azo ahodina 360 °.4. Maivana, maivana, azo entina, mihantona ary...
FCD63 andian-tsarimihetsika mipoaka-porofo avo lenta en...
Modely Implication Features 1. Aluminum firaka maty-fanariana akorandriaka, ny ambonin'ny electrostatically sprayed, ary ny bika aman'endriny tsara tarehy.2. Miaraka amin'ny fiasan'ny dimming manan-tsaina, dia afaka mahatsapa fa ny vatan'olombelona dia mihetsika araka ny famirapiratana napetraka aorian'ny fihetsiky ny vatan'olombelona ao anatin'ny faritra araha-maso.3. Pure flameproof telo-lava-bato rafitra mitambatra, mety amin'ny entona mipoaka sy ny vovoka mirehitra tontolo iainana, tsara amin'ny fipoahana-porofo fampisehoana sy ny photometric fampisehoana.4. Stainles...
Endri-javatra misy fiantraikany amin'ny modely 1. Ny jiro eny an-dalambe dia ahitana mody solar, mpanara-maso jiro an-dalambe manan-tsaina, bateria tsy misy fikojakojana (nalevina), jiro tsy mipoaka BAD63, andrin-jiro ary singa hafa.Ny maody solar dia matetika DC12V, DC24 monocrystalline silisiôna takelaka na polycrystalline silisiôma sela solar amin'ny andian-dahatsoratra sy mifanitsy.Izy ireo dia voaisy tombo-kase mafy amin'ny vera miendrika, EVA ary TPT.Ny rafitra firaka aluminium dia napetraka manodidina ny periphery, izay misy rivotra mahery sy havandra ...
dYD andian-jiro tsy mipoaka (LED) jiro fluorescent
Ny endri-javatra momba ny modely 1. Ny fefy dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firaka aluminium mahery vaika indray mandeha.Ny ivelany dia nofafazana plastika tamin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta taorian'ny fipoahana tifitra tamin'ny hafainganam-pandeha avo.Misy tombony vitsivitsy amin'ny fefy: rafitra henjana, fitaovana avo lenta, hery lehibe, fiasa tsara amin'ny fipoahana.Manana adhesion matanjaka amin'ny vovoka plastika izy io ary ny fampisehoana anticorrosive lehibe.Madio sy tsara tarehy ny ivelany.2. Manana rafitra patanty izy ary afaka mamerina ...